ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ ဆွဲနှုတ်ခြင်း၊ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေးထွေးခံရခြင်း | The Smiting, Plucking, Shame and Spitting | Real Conversion
ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ ဆွဲနှုတ်ခြင်း၊ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေး ထွေးခံရခြင်း
THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING
မတ်လ ( ၂၅ ) ရက်၊ သခင်ဘုရာ၏ ညနေပိုင်းတွင်
A sermon preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
Lord’s Day Evening, March 25, 2018
“ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို၎င်း၊ နားပန်းဆံကို နှုတ်သောသူ တို့အား၊ ငါ့ပါးကို၎င်း၊ ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေးထွေး ခြင်းမှ ငါသည် ကိုယ့်မျက်နှာကိုမလွှဲ။” (ဟေရှာယ ၅၀း ၆ )
ဤသည်မှာ ဟေရှာယကျမ်းစာထဲတွင် အစေခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုံးခုမြောက် ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရမည်အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပရောဖက်ပြု ထားသည်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား မိန့်တော်မူသည့်အချိန်၌ ရည် ညွှန်းပြောဆိုမှုတွေလုပ်ဆောင်သည်လည်းဖြစ်ပါသည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တကျိပ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊ ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ ပရောဖက် များရေးမှတ်သမျှသည် လူသား၌ ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုး သားတို့လက်သို့အပ်နှံခြင်း၊ ညှင်းဆဲခြင်း၊ တံထွေးနှင့်ထွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် လူသားကို ရိုက်ပုတ်၍ သတ်ကြလိမ့် မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။” ( လုကာ ၁၈း ၃၁- ၃၃ )
ဟေရှာယ ၅၀း ၆ ၏ မှတ်သားဖွယ်ရာ ပရောဖက်ပြုချက်သည် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ရည်ညွှန်း ထားခြင်းမရှိဘဲ ယေရှုကိုသာ ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ အမှန်တကယ် ပြည့်စုံလာသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
“ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို၎င်း၊ နားပန်းဆံကို နှုတ်သောသူ တို့အား၊ ငါ့ပါးကို၎င်း၊ ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေးထွေးခြင်း မှ ငါသည် ကိုယ့်မျက်နှာကိုမလွှဲ။” ( ဟေရှာယ ၅၀း ၆ )
ဤအခြေပြုကျမ်းထဲကနေ ယနေ့တွင် အချက်အလက်သုံးခုကို ဝေမျှလိုပါသည်။
၁။	ပထမအချက်။ ယေရှုသည် နှိပ်စက်မှုများ၌ မိမိကိုယ်ကို “အပ်နှံပါသည်။”
ဒေါက်တာ Strong (အမှတ် ၅၄၁၄ )) က ဟေဗြဲဘာသာစကား “nathan” ဟူသောစ ကားလုံးက “ပေးခြင်း” ဟုဆိုလိုကြောင်း ပြောဆိုသည်။ တကယ်တော့ ယေရှုသည် ရိုက်နှိပ် သောသူတို့အား ၎င်း၏ ကျောကို “ပေးထား” ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဆံပင်ကို ဆွဲနှုတ်လို သောသူတို့အား ပါးကို “ပေးထားခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ “ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်တံထွေးထွေးလိုသူ များအား” မျက်နှာကို “ပေးထားခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုထားသည်။
“ငါသည် ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်၍၊ …..နောက်တဖန် ကိုယ်အသက် ကို ပြန်ယူရသောအခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။ ထိုအခွင့်ကို ခမည်းတော် သည် ပေးတော်မူပြီ” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ( ယောဟန် ၁၀း ၁၇- ၁၈ )
တဖန် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်၌ သူ့အား ဖမ်းဆီးဖို့ လာကြသည့်အချိန်တွင် ယေရှုက ပေတရု အား ဤသို့ဆိုထားသည်။
“ယခုပင် ငါ့အဘကို ငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်းကင်တမန် တဆယ့်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့စေလွှတ်တော်မူ မည်ကို၎င်း၊ သင်သည် မထင်သလော။ သို့ဖြစ်လျှင် ဤသို့သော အမှုအရာတို့သည် ဖြစ်ရမည်ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ် သို့ပြည့်စုံအပ်နည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( မဿဲ ၂၆း ၅၃- ၅၄ )
စစ်သားများသည် သူ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရန် လာကြသောအခါ ယေရှုသည် သူ့အား အကာအကွယ်ပေးမည့် ကောင်ကင်တမန်ပေါင်း ၇၂၀၀၀ ခေါ်နိုင်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ သို့ရာ တွင် ထိုသို့ မလုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ကယ်တင်ရှင်သည် “ရိုက်နှက်သူများအား” ၎င်း၏ ကျော၊ ပါးပြနှင့်မျက်နှာကို “ပေးထားခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ဤလောက၌ သူလာရသည့်အ ကြောင်းရင်းဖြစ်သော လူတို့ကိုကယ်တင်ရန်၊ သူ့ထံသို့လာသောသူတို့ကို ရွေးနှုတ်ရန် ရည် ရွယ်ချက်တို့ကို ပြည့်စုံစေရန် ထိုဒုက္ခဝေဒနာများစွာ၌ သူ့ကိုသူ “ပေးထားခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။
“လူအပေါင်းတို့ကို ရွေးအံ့သောငှါ ကိုယ်ကိုကိုယ် စွန့်တော်မူပြီ။” (	၁ တိ ၂း ၆ )
“ထိုသခင်သည် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အလို တော်နှင့်အညီ ဆိုးညစ်သော ဤပစ္စုပန်ဘဝမှ ငါတို့ကို ကယ်နှုတ် ခြင်းငှါ၊ ငါတို့အပြစ်ကြောင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် အပ်ပေးတော်မူ၏”။ ( ဂလာတိ ၁း ၄ )
“ဒုစရိုက်မှ ငါတို့ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းငှါ၎င်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် စွန့်ကြဲတော် မူပြီ။” (တိတု ၂း ၁၄ )
သူသည် ဒုက္ခခံစားရန်၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းကို ရရှိရန်နှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံရန် မိမိ ကိုယ်ကို ပေးထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်ကို ချစ်တော်မူသည်။ သူက ဤသို့ဆို ပါသည်။
“ကိုယ်အဆွေတို့အဖို့အလို့ငှါ ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက် သာ၍မြတ်သောမေတ္တာသည် အဘယ်သူ၌မျှမရှိ။” ( ယော ၁၅း ၁၃ )
ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြေကြီးပေါ်သို့ ဆင်းကြွလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူများအား အသက်ကို ပေးရန္၊ ထိုရှက်ကြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်မည့်အကြောင်းပေတည်း။ မည်သို့သော အတွေးအခေါ်မျိုးဖြစ်ပါသ နည်း။ သူက “ငါသည် သင့်ကိုချစ်သောကြောင့် ရိုက်ပုတ်သောသူတို့အား ကျောကို ပေးပါ၏။ ဆံပင်ဆွဲနှုတ်သူတို့အား ပါးပြင်ကို ပေးပါ၏။ အကြောင်းမှာ ဤအရာမှာ သင့်ကိုကယ်တင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို သိရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးသော ကာလတရားစီရင်ခြင်းတွင် သင်၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမှ သင့်မျက်နှာကိုကယ်တင်နိုင်မည်အ ကြောင်း ရှက်ကြောင့်ခြင်းနှင့်တံထွေးထွေးခြင်းသို့ ကျွန်ုပ်မျက်နှာကို ပေးပါ၏။” သူသည် သင့် ကိုချစ်သောကြောင့် သူ့အသက်ကို ထိုကြောက်မက်ဖွယ်ရာလက်သို့ အပ်နှံခဲ့လေသည်။ သူ သည် သင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လေသည်။ “ယေရှုသည် အပြစ်သားတို့မိတ်ဆွေ” သီချင်းကို အားလုံး သီဆိုကြပါစို့။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကြရအောင်။
( “အပြစ်သားတို့၏မိတ်ဆွေ၊ ယေရှု” John W. Peterson, ၁၉၂၁-၂၀၀၆ ).
၂။	ဒုတိယအချက်။ ယေရှုသည် သင့်ဝိညာဉ်၏အပြစ်ကို ကျန်းမာစေရန် ထိုနာ ကျင်ခြင်းဝေဒနာ၌ မိမိအသက်ကို “ပေးခဲ့” သည်။
သူသည် “ရိုက်ပုတ်သောသူတို့အား ( မိမိ ) ကျော ကိုပေးထားသည်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန် မထင်လိုက်ပါနှင့် သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ပတ်လတ်မင်းသည် ယေရှုကိုယူ၍ ရိုက်ပြီးမှ။” ( ယောဟန် ၁၉း ၁ )
အစိုးရမင်း၊ပိလတ်က သူ့အား ကြာပွတ်နှင့်ရိုက်ခြင်းနှင့်မြင်းလှည်း ဆွဲသကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းစွာပြုမူခြင်းကို ခွင့်ပြုထားခဲ့သည်။ သိုးအရိုး အလား လိန်ပင်လျက်ရှိသည်။ ရိုက်နှက်သောအချက်တိုင်းသည် ခန္ဒာကိုယ်ကိုစုတ်ပြဲစေပါသည်။ ၎င်းသည် စိတ်ပျက်စရာရိုက်ချက် များကြောင့် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ကြာပွတ်နှင့်ရိုက်ခြင်းသည် သေခြင်းထက်တောင်မှ အလွန်စက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းသည့် ပြစ် ဒဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနှေးနှင့်အမြန် လူတွေကို ခံနိုင်ရည် မရှိ လောက်အောင် ဖျက်ဆီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာရှိသော ကယ် တင်ရှင်သည် ရိုက်ပုတ်သောသူတို့အား ကျောကိုပေးသည်။ ( သူ တို့သည် ) ( နက်နဲသောဒဏ်ရာ ) ကို ပေးခဲ့ကြသည်။ အလွန်စိတ် ဆင်းရဲစရာအခြေအနေပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာကို အဘယ်သို့ ကြည့်ရှုနိုင်၊ ကြည့်ရှုဝံ့မည်နည်း။ (C. H. Spurgeon, “အရှက်တ ရားနှင့်တံထွေး တွေးခြင်း”၊ The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, ၁၉၇၂၊ အတွဲ ၂၅၊ စာ- ၄၂၂ )
ယေရှုဘုရား၊ ရိုက်ပုတ်သောသူတို့အား အဘယ့်ကြောင့် ကျောကိုပေးထားပါသနည်း။ တဖန် အဖြေကိုပေးထားသူမှာ ဟေရှာယပင်ဖြစ်ပါသည်။
“သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျက် ရှိကြ၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၅ )
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ရန် သူ၏ကျောပြင်ထက်တွင် “ဒဏ်ရာပေါင်းများစွာ” ဖြင့် ရင်းနှီးခဲ့ရသည်။ တမန်တော် ပေတရုက ဤအကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုထားပါ သည်။
“ငါတို့သည် အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ အသေဖြစ်၍၊ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအရာ၌ အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်း၊ ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာ ခံတော်မူပြီ။ ဒဏ်ချက်တော္ အားဖြင္႔ သင်တို့ အနာ ပျောက်လျက် ရှိကြ၏။” (( ၁ပေ ၂း ၂၄ )
အပြစ်ကြောင့် ကြေမွပျက်စီးနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို ယေရှုထမ်းရွက်သော ဒဏ် ရာဒဏ်ချက်များဖြင့်သာ ကျန်းမာစေနိုင်သည်။
သူသည် တိုင်ပေရီယားပင်လယ်နားတွင်ရှိနေစဉ် လူအုပ်ကြီးသည် သူ့ထံသို့လာကြ ပြီး
“သူတို့အား လုံးကို အနာငြိမ်းစေသည်။” ( မဿဲ ၁၂း ၁၅ )
သူသည် သူတို့ကို ကျန်းမာစေသည့်နည်းတူ သင့်၏အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသောစိတ်နှလုံးကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါသည်။ “ဆိုးသွင်းသောအတွေးအခေါ်” များကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါသည်။ ( ယေရမိ ၁၇း ၉ ) Charles Wesley, က ၎င်း၏ ခရစ္စမတ်သံပုံသီချင်း “နားထောင်ကောင်းကင် သားကြွေးကြော်” တွင် ခရစ်တော်သည် “ဘေးဒဏ်ပေါင်းကင်းရှင်း တန်ခိုး၊ ပေးပိုင်ရှင်သခင် မြတ်သည် လူထာဝရသက်တည်ကြည်ရစိမ့်သောငှါ ကောင်းကင်မှဆင်းသက် သည်းခံမွေးဖွါး ရ” ဟု ဆိုပါသည်။ ယေရှုထံသို့လာပါ။ သင့်စိတ်နှလုံးတွင်ရှိသော အပြစ်ဒဏ်ချက်များကို သူ့ ခံစားဝေဒနာများဖြင့် ကျန်းမာစေလိမ့်မည်။ ထို့နောက် သင်သည် အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်းကို ခံရပေလိမ့်မည်။
၃။	တတိယအချက်၊ အပြစ်သားဖြစ်သော သင့်အတွက် ကိုယ်စားခံအနေ ဖြင့် ထိုနှိပ်စက်ခြင်းများ၌ မိမိကိုယ်ကို “ပေးအပ်ခဲ့” သည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာ ထိုး ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍၊ သူ ခံရသော ဒဏ်ချက် အားဖြင္႔ ငါတို့သည္ အနာပျောက်လျက္ ရှိကြ၏။ ငါတို့ ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွှဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးသီး လိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ်သိမ်းသော ငါတို့ ၏ အပြစ်များကုိ သူ့ အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။” ( ဟေရှာ ၅၃း ၅-၆ )
ယေရှုသည် သင့်ကိုယ်စား ဤဒုက္ခဝေဒနာအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ ငရဲဘုံ၏ဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှ သင့်ကို ကယ်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
“ထိုအခါ မျက်နှာတော်ကို တံထွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ လက်သီးနှင့်ထိုး ကြ၏။ အချို့တို့သည်လည်း ပါးတော်ကို လက်နှင့်ပုတ်၍။” ( မဿဲ ၂၆း ၆၇ )
“ထိုအခါ အချို့တို့သည် ကိုယ်တော်ကို တံထွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင် လက်သီးနှင့်ထိုးလျက်၊ ပရောဖက်ပြု၍ ဟောတော်မူပါဟု ဆိုကြ၏။ မင်းလုလင်တို့သည်လည်း ပါးတော် ကို လက်နှင့်ပုတ်ကြ၏။” ( မာကု ၁၄း ၆၅ )
“ကိုယ်တော်ကို တံထွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ ကျူးလုံးကိုယူ၍ ခေါင်း တော်ကို ရိုက်ကြ၏။” ( မဿဲ ၂၇း ၃၀ )
“ခေါင်းတော်ကို ကျူလုံးနှင့်ရိုက်ခြင်း၊ တံထွေးနှင့်ထွေးခြင်း၊ ရှေ့ တော်မှာဒူးထောက်၍ ပြပ်ဝပ်ခြင်းကိုလည်း ပြုကြ၏။” ( မာကု ၁၅း ၁၉ )
“ယေရှုကို ကိုင်ဆွဲသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပြက်ရယ်ပြု၍ ရိုက်ပုတ်ကြ၏။ မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင် လက်နှင့်ပုတ်လျက်၊ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သူပုတ်သည်ကို ပရောဖက်ပြု၍ဟောတော် မူပါဟုဆိုကြ၏။ အခြားသောစကားများဖြင့်လည်း ကိုယ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့၍ ပြောဆိုကြသေး၏။” ( လုကာ ၂၂း ၆၃- ၆၅ )
“ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုယူ၍၊ ရိုက်ပြီးမှ။” ( ယောဟန် ၁၉း ၁ )
Joseph Hart ကလည်း ဤသို့ဆိုပါသည်။
[ဤစိတ်ပျက်စရာနေရာ] တွင် စော်ကားခံရ။
၎င်းတို့ဖန်ဆင်းရှင်၏မျက်နှာကို တံထွေး ထွေးခဲ့ကြ။
( “သူ၏နာကျင်ခြင်း” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ Dr. Hymers က ပြင်ဆင်သည် ).
ယေရှုသည် ထိုဒုက္ခဝေဒနာအပေါင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ လက်များ၊ ခြေများကို သံမှိုဖြင့် ရိုက်သတ်ခြင်းခံရသည်။ သူသည် သင့်ကိုယ်စား ထိုကြောက် မက်ဖွယ်ရာနာကျင်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ရပါသည်။ သူသည် သင့်အပြစ်၏အခကိုပေး ဆပ်ရန် သင့်ကိုယ်စား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ သင့်အား ကျန်း မားခြင်းကိုပေးပြီး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေလျက် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
“ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဒာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်းကိုခံ၍၊ ဝိညာဉ်တော်အာဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ငါတို့ကို ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပို့စေခြင်းငှါ၊ ဖြောင့်မတ်တော်မူ သောသူသည်၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက် ဒုစရိုက်အပြစ် များကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။” ( ၁ ပေ ၃း ၁၈ )
Dr. Isaac Watts က ဤသို့ဆိုသည်။
ဦးခေါင်း၊ ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးများကို ကြည့်ပါ၊
ကျွန်ုပ်စိတ်၊ အသက်နှင့်အရာအားလုံးကို တောင်းဆိုထား။
( “အံ့ဘွယ်ကားတိုင်ကို ခြုံငြုံကြည့်သောအခါ” Isaac Watts, D.D., ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ).
ထို့အပြင် William Williams ကလည်း ဤသို့ဆိုပါသည်။
အပြစ်ရှိလူသားများ၏ ကြီးလေးသော အပြစ်ဝန်၊
( “နာကျင်ခြင်းတွင် ချစ်မြတ်န်ိုးခြင်း” William Williams, ၁၉၇၅ ).
Emi Zabalaga သည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် မွေးဖွါးခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ဝတ် ပြုအစီအစဉ်တိုင်းတွင် ပါဝင်လာသည်။ သို့ရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ခရစ်ယာန်ဟု မသတ်မှတ်ပါ။ သူသည် အခြားသူများနည်းတူ သဘာဝအားဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ၎င်းကိုယ်တိုင်ပြုသောအပြစ်နှင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်နေ့တွင် တရားဒေ သနာအပြီး၌ ရှေ့သို့လာခဲ့သည်။ သူမသည် ဒူးထောက်လျက် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစား ခဲ့ပါသည်။ သူများပြောခဲ့သည်ကို နားထောင်ကြပါစို့။
“ကျွန်ုပ်အပြစ်သည် အောက်ခြေမဲ့ပင်လယ်ပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် မသယ်ပိုးနိုင်တော့ပါ။ ခရစ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ သူ့ အသွေးတော်ကို ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဒူးထောက်ပြီး ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်၏ရုပ်တုကိုးကွယ်သည့်ခံစားချက်မျိုးမှ လွတ်မြောက် စေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်နှင့်သေချာမှုအတွက် ဆန္ဒထဲ က လွတ်မြောက်စေမည်။ သူတို့ကိုသွားခွင့်ပြုပြီး ကယ်တင်ရှင်၏ လက်တော်ထဲမှာ ပြိုလဲခဲ့ပါသည်။ အခြားမှားယွင်းသောပြောဆိုမှု များကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ရှုပြီး အရင် ကလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ ခံစားချက်များကို စစ်ကြောခြင်းကို လုပ် ဆောင်နေမည့်အစား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ကို ကြည့်ရှုပါ သည်။ အသက်ရှင်သော ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင် တော်မူသည်။ မြတ်သောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အပြစ်များ ကို ဆေးကြောသည်။ လေးသော အပြစ်ဝန်ကိုလည်း သယ် ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်ကို ငရဲသို့ပို့ဆောင်သင့်သော ဘုရား သခင်၏အမျက်တော်ကို နူးညံ့စေသည်။ ကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှကို ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်မှတ်တမ်းအားလုံးကို သူ ၏ အသွေးတော်အားဖြင့် “အပြစ်မရှိ” ဟု ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေ၊ ကယ်တင်ရှင်၊ သူရဲကောင်းနှင့်သခင် လည်းဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောသကဲ့သို့ “ပြော၍မ ကုန်နိုင်သော ဆုကျေးဇူးတော်အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူး တင်ပါသည်- ကျေးဇူးတင်ပါသည် ယေရှုဘုရား” ဟုသာဆိုနိုင်ပါ သည်။
ခရစ်တော်သည် သင့်၏ကိုယ်စားပြုဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သင့်အပြစ်ကြွေးကိုဆပ်ပေး ရန် သင့်ကိုယ်စား အသေခံခဲ့ပါသည်။ စပါဂျွန်ကြီးက “တစ်ခြားသူများက အခြားသောအရာ များကို ဟောပြောကောင်း ဟောပြောကြမည်။ သို့သော် ဤတရားပလ္လင်သည် ခရစ်တော်၏ ကိုယ်စားခံခြင်းကို အမြဲပဲ့တင်ထပ်နေစေရလိမ့်မည်” ဟု ဆိုပါသည်။
ယေရှုသည် သင့်အပြစ်ကြွေးကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့်အ သေခံခြင်းအားဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ယေရှုထံသို့လာပါ။ သင့်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီး သင့်ဝိညာဉ် ကို ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ သင့်စိတ်နှလုံးသားဖြင့် ဤသို့ပြောပါ။
အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်ကိုဆေးကြော၊ သန့်စင်ပါ၊
( “ကျွန်ုပ်လာပါသည်၊ သခင်” Lewis Hartsough, ၁၈၂၈-၁၉၁၉ )
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Benjamin Kincaid Griffith က ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ကျွန်ုပ်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ချစ်သည်” (William R. Featherstone, ၁၈၄၂- ၁၈၇၈ ရေးစပ် သည်။ )
ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ ဆွဲနှုတ်ခြင်း၊ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့် တံထွေး ထွေးခံရခြင်း
“ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို၎င်း၊ နားပန်းဆံကို နှုတ်သောသူ တို့အား၊ ငါ့ပါးကို၎င်း၊ ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေးထွေး ခြင်းမှ ငါသည် ကိုယ့်မျက်နှာကိုမလွှဲ။” (ဟေရှာယ ၅၀း ၆)
( လုကာ ၁၈း ၃၁- ၃၃ )
၁။	ပထမအချက်။ ယေရှုသည် နှိပ်စက်မှုများ၌ မိမိကိုယ်ကို “အပ်နှံပါ သည်။” ယောဟန် ၁၀း ၁၇- ၁၈။ မဿဲ ၂၆း ၅၃- ၅၄။ ၁ တိ ၂း ၆။ ဂ လာတိ ၁း ၄။ တိတု ၂း ၁၄။ ယောဟန် ၁၅း ၁၃။
၂။	ဒုတိယအချက်။ ယေရှုသည် သင့်ဝိညာဉ်၏အပြစ်ကို ကျန်းမာစေရန် ထို နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ၌ မိမိအသက်ကို “ပေးခဲ့” သည်။ ယော ၁၉း ၁။ ဟေ ရှာယ ၅၃း ၅။ ၁ ပေ ၂း ၂၄။ မဿဲ ၁၂း ၁၅။ ယေရမိ ၁၇း ၉။
၃။	တတိယအချက်၊ အပြစ်သားဖြစ်သော သင့်အတွက် ကိုယ်စားခံ အနေဖြင့် ထိုနှိပ်စက်ခြင်းများ၌ မိမိကိုယ်ကို “ပေးအပ်ခဲ့” သည်။ ဟေရှာယ ၅၃း ၅-၆၊ မဿဲ ၂၆း ၆၇၊ မာကု ၁၄း ၆၅၊ မဿဲ ၂၇း ၃၀၊ မာကု ၁၅း ၁၉၊ လုကာ ၂၂း ၆၃- ၆၅၊ ယောဟန် ၁၉း ၁၊ ၁ ပေ ၃း ၁၈။